Tababarka Suuqgeynta | Martech Zone
Falanqaynta, suuqgeynta waxyaabaha, suuqgeynta iimaylka, suuqgeynta mashiinka raadinta, suuqgeynta warbaahinta bulshada, iyo tababarka tikniyoolajiyadda Martech Zone
Jimco, Nofeembar 12, 2021 Jimco, Nofeembar 12, 2021 Douglas Karr
Sanado badan, waxaan hirgaliyay oo aan isku daray daraasiin baraha bulshada ah macaamiisha. Wali waxaan xiriir weyn la leeyahay qaar badan waxaadna sii wadeysaa inaad aragto anigoo kor u qaadaya aaladaha cusub iyo kuwa jira. Taasi waxay jahawareerin kartaa akhristayaasha… la yaabban sababta aanan si fudud ugu talin oo aan u riixo hal madal qof kasta. Anigu ma sameeyo sababtoo ah baahi kasta oo shirkad kastaa way ka duwan tahay midba midka kale. Waxaa jira meelo badan oo warbaahinta bulshada ah oo caawin kara ganacsiyada… laakiin adiga
Sida Loo Wanaajiyo Fiidiyowgaaga Youtube iyo Kanaalka
Waxaan sii wadnay inaan ka shaqeyno hanuuninteena habeynta macaamiisheena. In kasta oo aan xisaab hubin oo aan u siino macaamiisheenna waxa qaldan iyo sababta ay u qaldan tahay, waxaa lagama maarmaan ah inaan sidoo kale bixinno hagitaan ku saabsan sida loo saxo arrimaha. Markaan xisaab hubin u sameyno macaamiisheenna, marwalba waan la yaabnaa dadaalka ugu yar ee la geliyay si kor loogu qaado joogitaankooda Youtube iyo macluumaadka la xiriira fiidiyowyada ay soo geliyaan. Badankood waxay soo geliyaan fiidiyaha, dejiyaan cinwaanka,
Maxay Indhaheena Ugu Baahan Yihiin Qorshayaal Midab Kale Oo Dheeri Ah plement Iyo Meeshaad Ka Yeeli Karto
Khamiis, Maarso 18, 2021 Arbacada, Oktoobar 13, 2021 Douglas Karr
Ma ogtahay in runti ay jirto sayniska cilmiga bayoolajiga ee ka dambeeya sida laba ama in ka badan oo midab midba midka kale u dhammaystirayo? Anigu ma ihi dhakhtarka indhaha ama dhakhtarka indhaha, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan u turjumo sayniska halkan dadka fudud sida aniga oo kale. Aan ku bilowno midabka guud ahaan. Midabyo Waa Joogtayn Tufaaxu waa casaan… sax? Waa hagaag, maahan run ahaantii. Soo noqnoqoshada sida iftiinka u muuqdo ee looga shaandheeyo dusha tufaaxa ayaa ka dhigaysa mid la ogaan karo, loona beddelay